VaMugabe Vanoviga VaNcube Vachipopota neZviri Kuitika Mubato Ravo
Chivabvu 04, 2012
Mutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri we Zanu PF, Va Robert Mugabe, vatsoropodza neChishanu kurwisana nekutenga mavhoti kuri kuitwa mubato ravo pasarudzo dzemakomiti ebato iri idzo dziri kuitwa mumatunhu ese munyika.
Zvinonzi mutevedzeri waVaMugabe, Amai Joice Mujuru, pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Va Emmerson Mnangagwa, vari kutatsurana musarudzo idzi.
Vachitaura pakuvigwa kwenhengo yebato ravo, VaEdson Ncube, pamarinda anovigwa magamba enyika, VaMugabe vati havasi kufara nekutengwa kwavati kuri kuitwa vatsigiri vebato ravo nevari kuda zvigaro musarudzo dzemakomiti e Zanu PF dzema district coordinating committee mumatunhu ese munyika.
Vane ruzivo nezviri kuitika mu Zanu PF vanoti mashoko aVaMugabe aya anga akanangana nemutevedzeri wavo, Amai Mujuru, pamwe naVaMnangagwa, avo vanonzi vari kutungamirira mapoka akasiyana mubato iri ayo anonzi ari kukwikwidzana kuti agotora matomhu pachabva Va Mugabe pachigaro.
Vatsigiri vevaviri ava vanonzi vakaita mhirizhonga svondo rapera musarudzo dzaiitirwa ku Masvingo uye mapoka maviri aya anga achiratidzira kwaMutare zvine chekuita nesarudzo idzi zvakazokonzera kuti vanowona nezvekusimbaradzwa kwemusangano mu Zanu PF, uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Va Webster Shamu, vapindire munyaya iyi.
VaMugabe vakurudzira kuti nhengo dzebato ravo dzishande pamwe chete vachiti kusawirirana nekutengana kuri kuitwa kuri kukonzera kuti Zanu PF iite zinyekenyeke pamberi pesarudzo dzavanoti dzichaitwa gore rino mushure mereferendamu.
Semagariro avo pose panovigwa magamba enyika pamarinda, VaMugabe vatsoropodza Britain vachiti haikwanise kutonga Zimbabwe sezvo Zimbabwe iri nyika yakasunguka. Vapomera Britain mhosva yekuda kutonga pasi rose.
Mumashoko anzi nenyanzvi dzezvematongerwo enyika anga akanangana nemutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC, Va Morgan Tsvangirai, VaMugabe vati hapana munhu achafa akatonga nyika ino anodyidzana nenyika dzekumavirira.
Vatungamiri vemapoka maviri ari muhurumende yemubatanidzwa vese vanga vasipo pavigwa VaNcube, kunze kwemakurukota maviri e MDC-T noti Va Samuel Sipepa Nkomo, avo vanowona nezvemvura pamwe naVaSeiso Moyo, vanove mutevedzeri wegurukota rezvekurima.
VaMugabe vatsanangura mushakabvu semunhu anga akamira pachokwadi pakushandira nyika.
Va Ncube vakaberekwa muna 1938 vakarwa muhondo yerusunguko.
Vakasarudzwa kuve nhengo ye Zanu PF inomirira Mpopoma kubva muna 1990 kusvika muna 1995. Muna 1998, Va Ncube vakasarudzwa kuve sachigaro we Zanu PF muBulawayo ndokuzosarudzwa zvakare muna 2004 kuve nhengo ye central committee yebato iri.
Kusvika pavakazofa nesvondo, VaNcube vange vave mutevedzeri wemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mu Zanu PF
VaNcube vasiya vana vashanu, vakomana vana nemusikana mumwe chete pamwe nevazukuru vatatu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaEarnest Mudzengi, mukuru weMedia Centre, vanoti zviri kuitika muZanu-PF hazvisi zvinhu zvinoshamisa.